Dhacdooyinka – Calan Qaran
Ciidamada dalka Ciraaq oo gudaha u galay magaalada Moosil
November 2, 2016 at 5:56 am	0 comments
Xoogagga dowladda Ciraaq waxa ay daafaha magaalada Moosil dagaal culus kula galeen dagaallama yaasha daacish. Waxa ay ciidamadan isku deyayaan inay markii ugu horeysay galaan magaalada, tan iyo markii ururka la baxay Khilaafada Islaamka uu qabsaday, in ka badan laba sano ka hor. Waxaa jiro isku dhac aad u xoogRead More
Itoobiya oo Dhabahii Bur Burka Cagta Saartey
August 9, 2016 at 6:45 am	0 comments
Marka hore hadii aynu dib u jaleecno taariikhdu markay aheyd sanadkii 1991-kii, ayay aheyd markii Jabhaddii xoreynta dadka Tigray-ga oo 16 sano halgan hubeysan kula jirtay Taliskii Dhargida ee Madaxweyne Mingistu Xayle Maryam ay kala wareegtay xukunka dalka. Jabhaddii Tigray-ga (Tigray People Liberation Front-TPLF) oo 7-dii nin ee aas-aastay ayRead More
Ruushka iyo Marerykanka: cidda dhabta ah ee bad-baadisay Erdogan
August 9, 2016 at 6:26 am	0 comments
Af-gambigii fashilmay ee Turkiga ayaa qorsheysnaa bishan August,mana jirin haba yaraatee wax uu arintan ka ogaa maamulka madaxweyne Erdogan. Hase ahaate, 2 maalin ka hor xilligii la fullin lahaa inqilaabka milateri ayaa waxaa dalka Turkiga gaartay Christiana Amanpour, oo ah saxfiyad asal ahaan Iraaniyad ah balse heysata dhalashada Ingiriiska, sidookalenaRead More
100 ku dhimatay kacdoonka barakeysan ee Ethiopia
August 9, 2016 at 6:02 am	0 comments
Hay’ada Xuquuqda Aadanaha ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 100 ruux ayaa ku dhimatay banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay dalka Ethiopia labadii maalmood ee la soo dhaafay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadka banaanbaxayay magaalooyin ku yaal dalka Ethiopia. Ururada xuquuqda aadanaha ayaa waxa ayRead More
Kala Shaki soo dhex galay Ankara iyo Washington
July 17, 2016 at 8:07 am	0 comments
Muwaadiniinta asalkoodu yahay Turkey ee ku nool dalka Mareykanka ayaa xukuumadda Washignton ugu baaqay inay masaafuriso Fetullah Gulen oo ah ganacsade lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey afgambigii dhicisoobay ee Jimcihii ku fashilmay Turkiga. Boqollaal Turki isaga kala yimid gobollada Mareykanka oo dibad bax weyn dhigay ayaa codsaday in wadaadka asalkiisuRead More
Erdogan oo ku dhawaaqay inuu fashilmay Afgambi
July 16, 2016 at 8:47 am	0 comments
Madaxwaynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa ka soo muuqday magaalada Istambul isaga oo diiday in uu wax afgambi ah ka dhacay dalkiisa. Ciidammo hubaysan ayaa markii hore sheegay in ay la wareegeen xukunkii. Waxaase la arkay Madaxwaynaha oo ay ku hareeraysan yihiin taageerayaal soo dhawaynaya. Isaga oo si toos ahRead More
56-sano kadib asaaska Xoogga dalka Somalia
April 12, 2016 at 3:59 pm	0 comments
Maanta oo kale 12-ka April waxaa sanad kasta la xasuustaa asaaska ciidamada xoogga dalka Somalia, oo laga joogo 56-sano laga soo billaabo 1960-kii. Munaasabad uu ka qeyb galay m/weynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee caasimadda Muqdisho. Hadaba Warbaahinta Calan Qaran waxay idiin sooRead More